အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: Oct 23, 2010
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Saturday, October 23, 2010 Saturday, October 23, 2010 Labels: အမှတ်တရ
သီတင်းကျွတ်ချိန်ခါ ရောက်ပြီဆိုရင် ဟိုးအရင်ကတော့ မိုးလေကင်းလွတ် သီတင်းကျွတ်ရယ်လို့ တင်စား ပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်.. မိုးရာသီလဲကုန်လို့ လေတွေလဲ မတိုက်တော့ဘဲ ဆောင်းရာသီဘက်ကို ခြေလှမ်းစတင် ၀င်ရောက်ကာ အေးချမ်းတော့မဲ့ အနေအထားပါ။ ဒါပေမဲ့ ရာသီဥတုတွေကလည်း အစိုးမရတတ်တဲ့ သဘောအရ မိုးလေကင်းလွတ်ဆိုတဲ့ သီတင်းကျွတ်ချိန်ခါ ရောက်တော့မှဘဲ ဒီနှစ် သီတင်းကျွတ်ရက်မှာတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ တစ်ခုသော ကမ်းရိုးတန်းဘက်ကို မုန်တိုင်းက ၀င်ရောက်လို့ လာပါတော့တယ်.. မုန်တိုင်းအရှိန်နဲ့ ကျန်ပြည်နယ်တစ်ချို့တွေလဲ မိုးဒဏ်ကို ခံနေကြရပါပြီ။ ကြားရတာ စိတ်မကောင်းစရာပါ။ သူတို့တွေမှာတော့ သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်ကို ဆင်နွဲနိုင်တော့မယ် မထင်ပါဘူး။ ဒီသီတင်းကျွတ် ချိန်ခါကိုတော့ လူတိုင်းက ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ နွဲချင်ကြမှာပါဘဲနော်။ ကိုယ်တွေမှာလည်း မွေးရပ်မြေရဲ့ အဝေးမှာ ရောက်နေပေမဲ့ သီတင်းကျွတ်ဆိုတဲ့ အသံလေးကြားတာနဲ့ ကိုယ့်မွေးရပ်မြေရဲ့ ပျော်စရာ ဓလေ့စရိုက်များ၊ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများကို မှတ်မှတ်ထင်ထင် သတိရမိတတ်ပါတယ်.. ဘယ်နေရာ ဘယ်အရပ်ကို ရောက်နေပါစေ.. ငယ်စဉ်ကတည်းက ဆင်နွဲခဲ့ရတဲ့ ကျွန်မတို့ဒေသရဲ့ သီတင်းကျွတ် မီးထွန်းပွဲတော်ကို မမေ့နိုင်ခဲ့တာ သေချာပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဒေသမှာ ကျင်းပလေ့ရှိတဲ့ သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်အကြောင်းကို ဒီနေရာကနေ အမှတ်တရလေး ပြောပြချင်ပါသေးတယ်ရှင်။
ကျွန်မတို့ဒေသမှာ သီတင်းကျွတ်မရောက်ခင် ၂ပတ်လောက်အလိုကတည်းက သီတင်းကျွတ် ပွဲတော်အတွက် အသက်အရွယ်အလိုက် အလုပ်စပြီး ရှုပ်ကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်.. ပထမဦးဆုံး အပျိုလူပျိုအဖွဲ့၊ မယ်ခိင်လို့ ရှမ်းလိုခေါ်ကြတဲ့ အိမ်ထောင်သည်တွေအဖွဲ့၊ အဖိုးအဖွားတွေအဖွဲ့ စသဖြင့် အဖွဲ့လိုက် သူ့အဖွဲ့နဲ့သူ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် လုပ်သူတွေက အစည်းအဝေးတွေ ခေါ်ယူကြပါတယ်.. အစည်းအဝေးမှာတော့ အုပ်စု တွေခွဲပြီး သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်အတွက် သူ့ကဏ္ဍအလိုက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြဖို့ လုပ်ငန်းများ ခွဲဝေသတ်မှတ်ကြပါတယ်.. အပျိုလူပျိုအဖွဲ့က လာသမျှ ဧည့်သည်တွေကို ဧည့်ခံကျွေးမွေးဖို့ တာဝန်ယူရပြီး အိမ်ထောင်သည် အဖွဲ့က ချက်ပြုတ်ရေးနဲ့ သံဃာတော်များ ဆွမ်းကွမ်းကိစ္စ တာဝန်ယူရကာ အဖိုးအဖွားတွေကတော့ လပြည့်နေ့ညမှာ ကျွန်မတို့ဒေသရဲ့ ဥရုချောင်းအတွင်း ဆီမီးတစ်ထောင် မျှောနိုင်ဖို့ ဆီမီးခွက် လုပ်ဖို့ ကိစ္စတွေမှာ တာဝန်ယူရပါတယ်.. အပျိုလူပျိုအုပ်စုရဲ့ ဧည့်ခံရေးမှာမှ ဟင်းခွက်ဖြည့်တဲ့သူ၊ သောက်ရေနဲ့ လက်သုပ်ပုဝါ တာဝန်ယူတဲ့သူ၊ စားသောက်ပြီး ပန်းကန်များကို လိုက်လံသိမ်းဆည်းသူ၊ ပန်းကန်ဆေးသူ စသဖြင့် အုပ်စုငယ်များ ထပ်မံခွဲရပြန်ပါတယ်။ အဲဒီရက်တွေမှာ အနီးတစ်ဝိုက်က တောတောင်တွေမှာ မုဆိုးမလက်ဘက်ရွက် အခူးထွက်သူက ထွက်ကြရပါတယ်.... ကျွန်မတို့ဘက်မှာ လက်ဘက်ပင် ရှားပါးတဲ့အတွက် ပေါပေါများများ ရှိတတ်တဲ့ မုဆိုးမလက်ဘက်လို့ခေါ်တဲ့ အရွက်ကို အသုံးပြုကြပါတယ်..
တာဝန်ခွဲဝေထားတဲ့အတိုင်း အသက်ကြီးတဲ့ အဖိုးအဖွားတွေ၊ အန်တီတွေအရွယ်တို့က ရောင်စုံစက္ကူလေးတွေ ဖြတ်ညှပ်ပြီး မီးခွက်လေးတွေ လုပ်ကြပါတယ်.. ဆီမီးတစ်ထောင်လို့ အလွယ်တကူခေါ်ကြပေမဲ့ တကယ်တမ်းတော့ ဆီမီးခွက်ကလေးတွေဟာ တစ်ထောင်မကအောင် များပြားပါတယ်.. အနီ၊ အပြာ၊ အ၀ါ၊ အစိမ်း အိုး.. အရောင်လေးတွေမှ စုံနေတာပါဘဲ ချစ်စရာ ရောင်စုံ ဆီမီးခွက်ကလေးတွေပေါ့နော်။ ပြီးတော့ အပ်ချည်ကြိုး ခပ်တုတ်တုတ်တွေကို မီးစာအဖြစ် ကျစ်ရပါတယ်.. ပြီးတော့မှ အဲဒီမီးစာလေးတွေကို ဆီမီးခွက်အတွင်းမှာ ကော်လေးတွေနဲ့ လိုက်ကပ်ရပါတယ်.. ဒီလိုဆိုရင် စက္ကူခွက်ကလေးထဲ ဆီဖြည့်ပြီး မီးစာမှာ မီးညှိလိုက်တာနဲ့ ဆီမီးခွက်အဖြစ် ရေထဲမျှောလို့ ရပါပြီ။ ဆီမီးခွက်လုပ်တဲ့ ပညာကိုတော့ အသက်ကြီးတဲ့အဖွားတွေက ရပ်ရွာဓလေ့ထုံးစံမို့ အစဉ်အဆက်လုပ်လာကြတော့ သူတို့က လုပ်တတ်ကြပြီး အန်တီအရွယ်တွေကို ပြန်လည်သင်ကြား လက်ဆင့်ကမ်းပေးကြပါတယ်… မီးခွက်လေးတွေ ပြုလုပ်နေတဲ့ ဘုရားကျောင်းဆောင် ထဲမှာတော့ ပျော်စရာကောင်းလောက်အောင် စကားသံတွေ ဝေေ၀ဆာဆာ အကျွေးအမွေးတွေ အဖြာဖြာနဲ့ပါဘဲ။ လက်ဘက်သုပ်လို စားဖွယ်ရာတွေကလဲ အလျှံပယ်ပါဘဲ။ မုဆိုးမ လက်ဘက်ရွက်ကို ပြုတ်ပြီး အုန်းသီးကိုခြစ်ကာ မြေပဲဆန်၊ နှမ်းတို့နဲ့ အဆိမ့်သုပ်လို့ အလှူအတန်းတွေမှာ ကျွေးလေ့ရှိပါတယ်။
ဒီမီးခွက်လေးတွေက ကျွန်မတို့ ဒေသမှာ ပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ ဆီမီးခွက်လေးတွေနဲ့ ဆင်ဆင်တူပါတယ်..
ရွာထဲက လူကြီးတစ်ချို့နဲ့ အရွယ်ရောက် ယောက်ျားတစ်ချို့ကျတော့ တောတောင်ထဲကို ၀ါးခုတ်ဖို့လူစုပြီး စီးစဉ်တိုင်ပင်ကြပါတယ်.. ခုတ်မဲ့ ၀ါးက ဖယောင်းတိုင်လေးတွေ ထည့်ပြီးမီးထွန်းလို့ရမဲ့ လက်တစ်လုံး သာသာ ထီးရိုးဝါးလို့ခေါ်တဲ့ ၀ါးလုံးသေးသေးလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်. အဲဒီဝါးလုံးတွေကို ခုတ်ယူလာကြပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းထဲမှာ စုပုံထားကာ လူတစ်ရပ် မရှိတဲ့အမြင့်၊ ကလေးလူကြီး လူတိုင်းမီနိုင်တဲ့ အနေတော် အရွယ်လေးတွေ ပိုင်းဖြတ်ပြီး ကျယ်ဝန်းလှတဲ့ ကျောင်းဝင်းကြီးတစ်ခုလုံး အပြည့် လူသွားလမ်းကလေး ချန်ထားပြီး ၀ါးတိုင်လေးတွေကို စိုက်ကြပါတယ်.. တစ်ချို့နှစ်တွေဆို ၀င်္ကဘာတွေလုပ်ကာ ကျောင်းဝင်းထဲ လျှောက်ကြည့်တဲ့ သူတွေ မျက်စိလည်ပြီး ၀ါးတိုင်တွေကြား ခြာခြာလည်နေအောင်လည်း လုပ်ကြပါသေးတယ်.. ၀ါးခုတ်ကြတဲ့ ဓလေ့က ကျွန်မတို့ ငယ်စဉ်က ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ အဲဒီချိန်တုန်းက ကျွန်မတို့ အရပ်ဒေသမှာ တောတောင်တွေ ထူထပ်ပြီး သစ်ဝါးတွေလဲ အလွန် အင်မတန်မှ ပေါလှပါတယ်.. အခုနောက်ပိုင်းတော့ ကျောက်မျက်ရတနာ တူးဖော်တဲ့သူတွေကြောင့် တောတောင်တွေ ပြုန်းတီးပြီး ၀ါးတွေလဲ ရှားပါးလာတာကြောင့် ၀ါးခုတ်တဲ့ ဓလေ့ မရှိတော့ဘဲ ၁လက်မအကျယ် သစ်သားတန်းလေးတွေ ကျောင်းဝင်းပတ်ပတ်လည် ရိုက်ပြီး အဲဒီတန်းလေးတွေပေါ် မီးထွန်းဖို့ ပြင်ဆင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..
နောက် ရပ်ရွာရဲ့ တာဝန်ရှိသူ ခေါင်းဆောင်များ၊ အလှူအတန်း ရက်ရောသူများနဲ့ ဘာသာရေး အလှူအတန်းတွေ၊ ပွဲလမ်းသဘင်တွေမှာ ကမကထ ပြုလုပ်ကြတဲ့ လူကြီးတွေက အလှူငွေတွေ ကောက်ခံ စုဆောင်းပြီး သီတင်းကျွတ်ပွဲမှာ ဘုရားဖူး၊ ဘုန်းကြီး ကန်တော့ လာရောက်ကြတဲ့ ရပ်ဝေးရပ်နီး အများသူငှာ အယုတ်အလတ်၊ အမြတ်မရွေးကို ကျွေးမွေးဖို့ စီစဉ်ပြင်ဆင်ကြပါတယ်.. ကျောင်းဝင်းကြီး ထဲက ချက်ပြုတ်ဆောင်ကြီးမှာ ဆန်အိတ်တွေ မြောက်များစွာ ၀ယ်ယူစုဆောင်းကြပါတယ်.. အချို့အလှူရှင်တွေလည်း ဆန်တွေကို အိတ်လိုက် လာလှူကြပါတယ်.. ဟင်းအဖြစ်ကျွေးမွေးဖို့ အသီးအရွက်၊ အခြောက်အခြမ်းတွေကို ၀ယ်ယူစုဆောင်းပါတယ်.. ( ဖရုံသီး၊ ပိန်းဥ၊ ခရမ်းသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး ၊ ပဲသီး၊ ငါးချဉ်) စသဖြင့် အများအပြားပါဘဲ။ ထင်း၊မီးသွေးတွေလဲ တောင်ပုံရာပုံ ကြိုတင် စုဆောင်းထားရပါတယ်.. ချက်ပြုတ်ရာမှာ ပါဝင်မဲ့သူများကလည်း အိုးကြီးခွက်ကြီးတွေ သယ်ယူကြ၊ ညအိပ်ထမင်းချက်ဖို့ နေရာတွေဦးကြနဲ့ ပျော်ရွှင် တက်ကြွနေကြတာပါဘဲ။
လပြည့်နေ့ညမှာတော့ ညနေကတည်းက လူတွေအားလုံးဟာ ခါတိုင်းထက်ပိုပြီး လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ရှိနေကြပါတယ်.. အားလုံးမျှော်လင့်နေတဲ့ ဆီမီးခွက်မျှောပွဲ ပြုလုပ်မှာမို့ပါ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းရေဆိပ်မှာတော့ ၀ါးဖောင်( ငှက်ပျောတုံးဖောင်) ပေါ်တင်ပြီး ပြသာဒ်တွေ မီးတွေထွန်းညှိ ပူဇော်ထားတဲ့ ရှင်ဥပဂုတ်ပုံတော်ကလည်း တင့်တယ်စွာ ရှိနေပါပြီ။ မီးခွက်တွေ မျှောတာနဲ့ ရှင်ဥပဂုတ်ဖောင်တော်ကိုလည်း မျှောချလိုက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်.. ရေချောင်းဆိပ်ကမ်းတွေမှာ လူတွေအားလုံး ရောက်ရှိနေကြပြီး အိုးစည်ဒိုးပတ်အဖွဲ့ကလည်း ဆူညံစွာတီးမှုတ်အော်ဟစ်ရင်း အသံပေးနေကြပါပြီ။ အမှောင်ထုလေး သန်းလာတာနဲ့ ကောင်းကင်ယံမှာ တိမ်ကင်းစင်ဝင်းပနေတဲ့ လမင်းကြီးကလည်း တဖြေးဖြေး လင်းထိန်စပြုလာချိန်မှာတော့ ဆီတွေထည့်ထားတဲ့ အိုးတွေ၊ ဆီမီးခွက်ရောင်စုံထည့်ထားတဲ့ ခြင်းကြီးတွေကို လူအချို့က သယ်လာကြပြီးတာနဲ့ ဆီမီးခွက်ထဲ ဆီဖြည့်သူဖြည့်၊ မီးခွက်တွေကို မီးထွန်းညှိသူညှိနဲ့ အားလုံး လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်ကုန်ကြပြီး ချောင်းရေထဲမှာလည်း မီးခွက်ရောင်စုံလေးတွေ စတင်မျှောပါစ ပြုလာနေပါပြီ။ ညအမှောင်က စိုးမိုးလာပြီး လမင်းကြီးကလည်း ရွှန်းရွှန်းမြမြ ၀င်းဝင်းပပ သာချိန်မှာတော့ ဆီမီးခွက်တွေအားလုံး မီးညှိပြီးဖြစ်လို့ ချောင်းရေထဲ ရောက်ကုန်ပါပြီ။ အဲဒီချိန်မှာတော့ ဥရုချောင်းထဲမှာ တစ်လက်လက် စီးမျှောနေတဲ့ အရောင်စုံ ဆီမီးခွက်ကလေးတွေ တစ်လုံးချင်းစီ သော်လည်းကောင်း အစုလိုက်သော်လည်းကောင်း လှပစွာ တွေ့ရပါပြီ။ မီးခွက်ရောင်စုံလေးတွေ ကြားမှာမှ ရှင်ဥပဂုတ် ဖောင်တော်က တအိအိနဲ့ ခန့်ထည်စွာ မျှောလာပါတော့တယ်.. ရွာအောက်ဘက် တံတားပေါ်ကနေ အဲဒီမီးခွက်ရောင်စုံ မျှောလာတဲ့ ရှုခင်းကို စောင့်ပြီးကြည့်သူတွေကလည်း တံတားတစ်ခုလုံး အပြည့်ပါဘဲ။ ချောင်းရေပြင်ကျယ်တစ်လျှောက်လုံး မီးရောင်စုံလေးတွေ စီကာတန်းကာ ဝေ့ကာဝိုက်ကာ စီးမျှောနေပုံက သီတင်းကျွတ်ရဲ့ အလှဆုံး ညသာ ဖြစ်ပါတော့တယ်. ကျွန်မ ဘယ်ဒေသ ဘယ်အရပ်ဘဲ ရောက်ရောက် မမေ့နိုင်တဲ့ မြင်ကွင်းလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်..
ဒီလပြည့်ညမှာဘဲ ကျွန်မတို့ အရပ်ဒေသရဲ့ ဓလေ့စရိုက်က လူကြီးမိဘတွေကို ကန်တော့ကြခြင်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်.. ဦးဆုံး အိမ်က အဖေအမေ၊ အဖိုးအဖွားတွေကို ငွေကြေးဖြစ်စေ၊ မုန့်၊ ချိုချဉ်၊ သီးနှံစတဲ့ နှစ်သက်ရာတွေနဲ့ အရင် ကန်တော့ကြပြီး အမျိုးအဆွေတွေဖြစ်တဲ့ သက်ကြီးရွယ်ကြီးတွေ၊ ဦးလေးအဒေါ်တွေကိုလည်း သူတို့အိမ်တွေကို သွားရောက်လို့ ကန်တော့ကြရပါတယ်.. ကျွန်မတို့မိသားစုဆို မောင်နှမတွေများတော့ အားလုံး စုစုစည်းစည်းနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး လူကြီးတွေကို လိုက်ကန်တော့ရတာ ပျော်စရာ၊ စိတ်ချမ်းမြေ့စရာ ကောင်းလှပြီး နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း မပျက်ကွက်တဲ့ ဓလေ့ထုံးစံလေးလဲ ဖြစ်ပါတယ်.. ကန်တော့သူတွေရဲ့ မျက်နှာမှာလည်း ပီတိအပြုံးတွေ ခြုံလွှမ်းနေသလို၊ ကန်တော့ခံရသူတွေရဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာလည်း အပြုံးပီတိတွေက ဂွမ်းဆီထိသလို ပြုံးပျော်နေတတ်ကြပါတယ်.. ကျွန်မတို့မိသားစုမှာ တစ်ယောက်ယောက်က အဝေးမှာ ရောက်နေရင်တောင် မိခင်ဖခင်တို့ကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် မကန်တော့နိုင်ပေမဲ့ သီတင်းကျွတ် ကန်တော့ငွေများ ပေးပို့ပြီး ကျန်တဲ့မောင်နှမတွေက မိဘတွေကို စုစုရုံးရုံး ကန်တော့တဲ့အလေ့ကို ဆက်လက် ပြုလုပ်ကြပါတယ်.. ဒီအလေ့အထလေးကိုလည်း အဝေးမှာ ရောက်နေတဲ့ မိသားစုတစ်ယောက် အနေနဲ့ လွမ်းဆွတ်လှပါတယ်.. ချစ်ခင်ရပါသော မိခင်ဖခင်တို့ကိုလည်း အဝေးကနေ ရည်မှန်းလို့ ဦးချ ကန်တော့ပန်း ဆင်လိုက်ပါတယ်ရှင်။
သီတင်းကျွတ် လပြည့်ကျော်တစ်ရက်ကစလို့ ဟိုဘက်ရွာ၊ ဒီဘက်ရွာ အပြန်အလှန် ဘုန်းကြီးကန်တော့ လာရောက်ကြတာမို့ အကျွေးအမွေး ဧည့်ခံကြိုဆိုရေးတွေနဲ့ နောက် သုံးရက် လေးရက်ကြာအထိ ချက်ကြပြုတ်ကြ၊ ကျွေးမွေးကြနဲ့ မအားလပ်ကြတော့ပါဘူး။ ကျွန်မတို့ဆီမှာ အလှည့်ကျ ဘုန်းကြီးကန်တော့တဲ့ ရက်ကို သတ်မှတ်ပါတယ်.. ဒီနေ့ကိုယ့်မြို့ကိုယ့်ရွာကို တစ်ခြားရွာက လာရင် အိမ်ရှင် မြို့ခံက ထမင်းကျွေးရပါတယ်.. စက်လှေတွေ၊ ကားတွေနဲ့ ရောက်လာကြတဲ့ မြို့ရွာအသီးသီးက ဘုန်းကြီးကန်တော့ လာကြသူများ လူပေါင်း ထောင်သောင်းအုပ်ကြီးကို မလစ်ဟင်းရအောင် တစ်ရွာလုံးက ထောင့်စေ့အောင် ကျွေးမွေးဧည့်ခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် ကျွေးမွေးကြတဲ့ ဟင်းတွေက အရည်သောက်ကတော့ မယ်ဇလီဆန်လှော်ချက်တာ များပါတယ်.. တောအုန်းဆန်လှော် ဟင်းချိုလည်း ကျွေးတတ်ပါသေးတယ်.. အခြားဟင်းတွေကတော့ ငါးချဉ်နဲ့ ရောနှယ်ကာ ညသိပ်ပြီး နှပ်ထားတဲ့ ငှက်ပျောအူသုပ်၊ ငါးပိချက်အတို့အမြုပ်၊ တစ်ခါတစ်ရံ ၀က်သားနဲ့ ကျောက်ဖရုံသီး၊ ကျွန်မတို့ဒေသမှာ စားလေ့ရှိတဲ့ ဟင်းပေါင်းဟင်းလှော်၊ မျှစ်ချဉ်လှော်၊ ငရုပ်သီးထောင်း၊ ဘာလချောင်ကြော် စသဖြင့် ဟင်းတွေကို ဘယ်လောက်များတဲ့ လူတွေဖြစ်ပါစေ။ နိုင်အောင် ကျွေးမွေးဧည့်ခံကြရပါတယ်.. ဆန်အိတ်ပေါင်း ၄၀လောက်အထိ ကျွေးရတဲ့ နှစ်တွေ ရှိခဲ့ပါတယ်.. ထမင်းကျွေးတဲ့ နေရာတွေကလည်း ဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့ ၇နေရာ ၈နေရာမှာ အုပ်စုတွေခွဲပြီး ပြင်ဆင်ကျွေးမွေးကြတာပါ။ ကျွေးမွေးတဲ့ နေရာတိုင်းမှာလည်း လက်မလည်အောင် လူတွေ စည်ကားနေတတ်ပါတယ်။
နောက်ရက်မှာတော့ အရင်ရက်က ဘုန်းကြီးကန်တော့ မလာရသေးတဲ့ ရွာတွေမြို့တွေက ကျွန်မတို့ရဲ့ ရွာကလေးဆီ ထပ်ရောက်လာကြပြန်ပါတယ်.. ဒီတော့လည်း မမောနိုင် မပန်းနိုင် အကျွေးအမွေးနဲ့ ပြန်ဧည့်ခံကြရပြန်ပါတယ်.. ဘုန်းကြီးကန်တော့ လာရောက်ကြသူတွေကလည်း အတီးအမှုတ်တွေ အိုးစည်ဒိုးပတ်တွေ၊ ရှမ်းအိုးစည်တွေ၊ ဦးရွှေရိုး ဒေါ်မိုး စတဲ့ အကအလှတွေ ရှမ်းသိုင်းကသူတွေ စသဖြင့် စုံလင်လှပါတယ်.. လာတဲ့သူတွေလဲ ပျော်၊ ဧည့်ခံသူတွေမှာလည်း မောပေမဲ့ ပျော်ကြရပါတယ်.. ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းထဲမှာလည်း လူတွေ ပြည့်ကြပ်ညှပ်နေအောင်ကို စည်ကားလှပါတယ်.. သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်ရက် ဘယ်လောက်ကြာကြာ တစ်ရွာလုံးက ပျော်ပျော်ပါးပါးဆင်နွဲရင်း ဓလေ့ထုံးစံအလိုက် ကျင်းပကြတဲ့ ကျွန်မတို့ဒေသရဲ့ ချစ်စရာ မီးထွန်းပွဲတော် ရက်များဘဲ ဖြစ်ပါတယ်..
ဒါတွေဟာ ကျွန်မရဲ့ မွေးဖွားရာ ဇာတိဒေသဖြစ်တဲ့ ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်ဒေသအနီးတစ်ဝိုက်က ကျေးရွာတွေရဲ့ သီတင်းကျွတ်ပွဲတော် အကြောင်းလေးပါ။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်က သတိရနေတာဖြစ်သလို အခြားသူများကိုလည်း ပြန်လည် မျှဝေချင်တာကြောင့် အမှတ်တရ ရေးတင်ဖြစ်တာပါ။ အားလုံးလည်း သီတင်းကျွတ်မှာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။ မိဘဆရာ ဘိုးဘွား လူကြီးသူမများကို ကန်တော့ပန်းဆင်နိုင်ကြပါစေရှင်။
ပုံတွေက ရိုက်ထားတာ မရှိလို့ Google ကနေ ရှာတင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်.